Ilay mpihira 50 Cent dia lasa mpanapitrisa aorian'ny fanekena an'i Bitcoins amin'ilay rakikira navoakany tamin'ny 2014 | Vaovao momba ny gadget
Nandritra ny taona lasa, nijaly tampoka ny bitcoin ary nitombo, mahatratra hatrany amin'ny $ 19.000 isaky ny singa. Ny sandan'ny bitcoin dia miakatra sy milatsaka toy ny sombin-javatra, noho izany tsy maintsy fantarintsika foana ny fiovaovana raha te-hampiasa vola vetivety isika.
Fa efa-taona lasa izay, ny sandan'ny bitcoin dia manodidina ny 500 $. Manaraka ny fironan'ny marika lehibe sasany, toa ny Microsoft na Steam, mpihira 50 Cent nanaiky bitcoin ho vola hividianana ny rakikirany farany, rakipeo iray izay namakivaky ny tsena tsy nisy fanaintainana na voninahitra, satria zara raha nahavita nivarotra 150.000 XNUMX fotsiny ny kopia.
Fivarotana ny rakitsorany ho an'ny bitcoins nahavita nanangona bitcoin sahabo ho 700, 400.000 dolara ny sandan'ny tsena tamin'izany. Toa tsy nilaina io vola io tamin'izany fotoana izany, satria navelany tao amin'ny poketrany virtoaly izy ireo. Mandrak'izao.
Manjary mahazatra kokoa ny maheno momba ny bitcoin ho vola hanatanterahana fifanakalozana ara-barotra. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fiakarana mahavariana izay nijaly nandritra ny taona 2017 sy tamin'ny volana voalohan'ny 2018, na dia nitotongana be aza androany, dia nanambara tamin'ny alàlan'ny kaontiny Instagram ilay rapper. ny sandan'ny bitcoins ananany dia mitentina 7,7 tapitrisa dolara.
Ny hevitra ny fanekena bitcoins hahafahany mivarotra ny rakikirany, dia toa fepetra goavambe iray taona vitsivitsy taorian'ny namelana azy hahazo fanomezana tena tsara ary izy ireo dia valisoa ho an'ilay rakikira navoakany tamin'ny 2014, album saika nitarika azy ho amin'ny fahaverezana. Araky ny ohabolana hoe: tsara kokoa tara toy izay tsy nisy, ary amin'ity indray mitoraka ity dia tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ilay mpihira 50 Cent dia lasa mpanapitrisa aorian'ny fanekena an'i Bitcoins amin'ilay rakikira navoakany tamin'ny 2014
Nintendo Switch dia toa nahomby kokoa noho ny Xbox One tany Espana